Ngaba ibhizinisi lam liba ngumviwa omhle we-backlinks eyenza?
Amashishini amakhulu ase-intanethi ahlahlo lwabiwo-mali kwiqela le-SEO yangaphakathi kwindlu kwaye sele elungele ukutshala imali ebonakalayo kuzo zonke iindlela zobuchule bokuphuculwa kwamanani banamathuba okuvelisa i-backlinks. Nangona kunjalo, kumashishini amancinci okanye asekuhlaleni azama ukugcina ukuhamba kwemali efanelekileyo, ukudibanisa isakhiwo akunakubonakala ngathi isicwangciso esilungisa imali.
Makhe sixubushe ukuba isakhiwo sokudibanisa sisisetyenziswe ngendleko enokusetyenziswa kwoshishino olusanda kutshatyalaliswa kwi-intanethi okanye akukho nto ingacacisekanga ukubeka ingqalelo kwiinkcukacha zangaphandle kwisizukulwana esezantsi.
Ingeniso yokubuyisela ungayifumana kwisakhiwo sekhonkco
Makhe sijonge ngakumbi ukuba yeyiphi indawo yokwakha ikhonkco kunye nokuba ingaba njani inxaxheba kwi-injini yethu yokukhangela injini. Le ndlela yokusebenza yangaphandle isetyenziselwa ukubonisa iinjongo zokukhangela ukuba isayithi lakho lixabiseke kangakanani. Xa iinjongo zokukhangela zihlola imithombo yewebhu efanelwe iphakamileyo ephezulu kwiziphumo zophando, ihlawula ingqalelo ngokubaluleka kwemibuzo kunye negunya lewebhu. Inceda iGoogle inikezela abasebenzisi abanezona zinto zifanelekileyo kwiimfuno zabo zophando. I-Google ihlola igunya lewebhusayithi isebenzisa izinto ezininzi, ebaluleke kunayo yiphi inombolo kunye nomgangatho wekhonkco zangaphandle ezikhomba umthombo web.
Iphakamileyo igunya lekhonkco, ixabiso elingakumbi kwisayithi lakho lingadlula. Igunya le-Backlink ligunyaziswe ngedata nokuthembeka kwendawo yokuxhuma kunye nokubaluleka komxholo apho esi sixhobo sifakwa khona. Ukuba abasebenzisi balandela i-backlink ethile, kunokuthi ithathwa njengobungcali kunye nobukhulu obuphezulu.
Ukuqhagamshelanisa isakhiwo ngokwawo kuthatha inzuzo eninzi kwiwebhusayithi. Makhe sibhale ezinye zazo:
Izixhumanisi ezingenayo zingakhuthaza igunya lolawulo lwesayithi lakho okanye ukuphakamisa i-traffic kwiphepha elithile lomthombo wakho wewebhu. apho ikhonkco iboniswe khona. Ngenxa yoko, i-Google izakujonga ukuba indawo yakho ihloniphekile kwaye inika indawo yakho indawo ephezulu kunye nokuthumela ezinye izitrato kwisiza sakho.
Ukubeka izixhumanisi zakho kwizithuba zabathengi kunye nezinye iifom zangaphandle, uzisa izithuthi kwindawo yakho. Ukuba izikhonkco zakho zijikelezwe ngumxholo kunye nomxholo osisiseko-mvavanyo oza kunika ixabiso kubaphulaphuli bakho abajoliswe kuyo, uza kufumana umzila ukusuka kubasebenzisi ngokuchofoza i-backlinks ngqo ngolwazi olungakumbi.
Ukuba ubeka igama lakho ngegama kwiiblogi zeposi kunye namanqaku kwiiwebhusayithi, ngokukhawuleza okanye kamva, abasebenzisi baya kuwukhumbula ngekhanda. Kwaye nangona aba basebenzisi bengaqakraza kwiikhonkco zakho, uya kuphucula ukubonakala kwegama lakho.
I-ROI (ukubuyisela utyalo-mali) I-backlink inokuhlala ngonaphakade, yingakho ixabiso labo linokunyuka ngaphezu kwexesha. Ukuba utyalo imali yakho ngokubeka unxibelelwano olusisigxina kwelinye lewebhu ezikumgangatho ophezulu, uza kufumana ukubuyela okuphezulu kule mali-mali ngendlela yohambo olujikelezayo kunye nokuguqulwa Source .